प्रहरीकै मोटरसाइकल लिएर कैदी फरार भएपछि……. - पूर्णपुष्टि
प्रहरीकै मोटरसाइकल लिएर कैदी फरार भएपछि…….
पूर्णपुष्टि, पुष ९
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद फैसला भएर सजाय भोगिरहेका एक कैदी प्रहरीकै मोटरसाइकल चढेर फरार भएको छ । दाङको घोराहीस्थित कारागारमा रहेका राजपुर गाउँपालिका– २८ जयराम परियार बिहीबार दिउँसो अस्पतालबाट भागेको हो ।
घोराही कारागारका नाइके समेत रहेका परियार बिहीबार दिउँसो फरार भएकोे जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार परियार बिहान छालाको उपचार गर्न भन्दै घोराहीस्थित एक अस्पतालमा बिहान ११ बजेतिर प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरीसँगै लु ३४ प ४१० नम्बरको मोटरसाइकल चढेर गएका थिए । उपचारका लागि भनेर हतकडी खोलेपछि परियार प्रहरी जवान चौधरीकै मोटरसाइकल लिएर भागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार प्रहरी जवान चौधरीको मिलेमतोमा परियार भागेको आशंका छ । घटनाबारे प्रहरी जवान चौधरीले दिउँसो चार बजेतिर मात्रै जानकारी गराएका थिए । चौधरीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान भैइरहेको छ । फरार भएका परियारको खोजीमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
Prevचौदण्डीका नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा कर्मचारीहरुबाट आफ्नो तलब कटाएर मृगौला पिडित निशानलाई सहयोग
Nextइटहरीमा ट्रकले ठक्कर दिँदा एक महिला घाईते, इटहरी–धरान सडकखण्ड अवरूद्ध